Wasiir Yamani ah oo sheegay in Xuutiyiintu ay maalintiiba dilaan 100 Qof rayid ah.
Cadan(SONNA)- Wasiirka Maamulka gudaha ee dalka Yeman Cabdi Raqiib Fatxi ayaa daboolka ka qaaday in Tirakoob la sameeyay ay ka soo ifbaxday in maleeshiyaadka Xuutiyiinta ka dagaalanta dalka Yeman iyo Ciidamada Madaxweynihii xukunka laga tuuray Cali Cabdalla Saalah ay maalintiiba dilaan 113 qof oo Rayid ah oo Haweyn iyo caruur ku jiraan.
Shir jara’id uu Wasiirku maanta ku qabtay Caasimada ku meel gaarka ee Cadan ayaa sheegay in xiligan shacabka Yeman ay la soo derestay musiibo bani’aadanimo tii ugu darneyd taa oo sabab u a ayuu yiri ” dagaalka sokeeye ee ka socoda gudaha dalkaasi”.
Wasiir Cabdi Raqiib Faatxi, wuxuu kaloo cadeeyay in 21 milyan yamani ah ay haatan baahi weyn u qabaan gargaar deg deg ah,wuxuuna intaa raaciyay in dagaalka ahliga ah ee yeman ka socoda ay ku dhinteen dad gaaraya 6440 qof, in ka badan 31kuna ay ku dhaawacmeen oo 1300 ka mid ah ay caruur yihiin.
Sida uu Wasiirku sheegay in hal Milyan Caruur ay waxbarasho la’an yihiin iminka, halka kun Iskuul waxbarashana ay noqdeen kuwo burburay ama la albaabada la isku dhuftay.
Wuxuu kaloo Wasiirka Maamulka gudaha ee dalka Yeman Cabdi Raqiib Faatxi sheegay in Gobolka Cadan oo xarunta kmg u ah Dowladda Caalamku aqoonsan yahay Cabdi Rabu Mansuur ay soo wajahday shidaal la’an tan iyo markii maleeshiyaadka Xuutiyiinta ay qabsadeen magaalada Sanca oo Saldhig u ah warshadiha iyo shirkadaha shidalka, wuxuuna soo jeediyay in xuutiyiinta ay xayiraada ka qaadaan cunaqabateynta shidaalka ee saran Cadan.
Wasiirku wuxuu kaloo sheegay in Madaxweynaha dalka Isutagga Imaaraadka Carabta Sheikh Mahamed bin Zayid uu u ballanqaaday in dhaawacyo gaaraya kun qof Yamaniyiin ah oo dagaalka ku dhaawacmay uu deeq daaweyn ah u fidinayo loona qaadayo Isbitaalada dalalka Sudan iyo Hindiya.